Zvese zvaunoda kuti uzive nezve Tabex - Rega kuputa izvozvi!
Zvese nezve Tabex - Iyo yese mishonga yechisikigo yekukubatsira iwe kurega kuputa
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve Tabex
Kwemakore anopfuura makumi mashanu Tabex akabatsira mamirioni muEastern Europe kurega kuputa iyo yakachengeteka uye yakasikwa nzira. Kune iri kure 50 acad. Orehov akawana uye akaongorora alkaloid cytisine iri muMhuri Papilionaceae uye ndicho chinhu chikuru chinoshanda cheTabex®. Cytisine ndeyeboka reboka reicicine blockers ayo anozivikanwa mukuita seanofema ekukurudzira. Iyo pharmacological ongororo cytisine kubazi rezvemishonga reSofia Medical Institute rakatanga nekukurumidza kubva kuma1865s ezana ramakore rapfuura uye chinangwa chavo kwaive kugadzira fomu yemiyero yezvinodiwa zvekumutsiridzwa. Munguva yezvidzidzo zvekuyedza pamakati asina kugadzikana, vaviri vanozivikanwa veBulgaria pharmacologists
Prof Paskov naDr. Dobrev vakasvika pamhedziso yakakosha yekuti nekuda kwehutachiona hwakaderera kupfuura nicotine uye zvakanyanya kune hutera hwayo hunotapura pesimba remwoyo cytisine inogona kushandiswa senzira yekurega kuputa nekuti inopindirana nemaakagashira akafanana muvanhu. muviri pamwe nicotine. Chinhu chinonakidza murungano urwu ndechekuti makore makumi mashanu apfuura vaviri vanoputa makemikari masayendisiti akasvika pane yakanakisa pfungwa nzira yekupa mukana kune vanhu vanosvuta fodya kuti vaende munzvimbo dzese dzekurega chirwere, vachiperekedza nguva yekumisa mudzanga uye panguva imwe chete iyoyo kunzwa uchisimudzirwa, kunge cytisine inowedzera yakasimbisa anti gastrointestinal athari.
Muna 1962 muBulgaria Prof. Isaev akasiyanisa cytisine kubva pamuti une goridhe cheni chirimwa uye akatanga kutsvagisisa kwekusikwa kwechigadzirwa chekutanga chekurapa Tabex®. Zvidzidzo zvakakura zvemakiriniki muBulgaria, Germany nePoland zvakatevera izvo zvakasimbisa kushanda uye zvakanyanya kune zvese zvekudiwa kwemaonero akanaka mukurega basa. Zvinonyatso kuzivikanwa kuti mamood uye kuzvidzora syndrome mamiriro epfungwa, ayo anofambidzana nekuvimbika, uko kunonetsa kukunda. Chidzidzo chekiriniki chakaitwa muBulgaria uye mhiri kwemakungwa chakasimbisa mukana uyu weTabex.
Tabex inoshanda sei mukati mehuropi hwako? Mashandisiro aungaita Tabex Zvidzidzo zvekuchipatara paTabex Nezve iyo Laburnum Muti